၈ မေ - ဝီကီပီးဒီးယား
မေလ၊ (၈)ရက်နေ့ သည် ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်အရ တစ်နှစ်တာ၏ (၁၂၈)ရက်မြောက် (ရက်ထပ်နှစ်ဖြစ်လျှင် (၁၂၉)ရက်မြောက်)) နေ့ရက် ဖြစ်သည်။ ယင်းတစ်နှစ်တာ ကုန်ဆုံးရန် ရက်ပေါင်း (၂၃၇) ရက် ကျန်သေးသည်။
၁.၁ ၁၆၀၀ ခုနှစ် မတိုင်မှီ
၁၆၀၀ ခုနှစ် မတိုင်မှီ[ပြင်ဆင်ရန်]
၄၅၃ ဘီစီ – နွေဦးနှင့် ဆောင်းဦးခေတ်: ကျင်းနိုင်ငံတွင်းရှိ အိမ်တော်များကြား စစ်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ကျောင်အိမ်တော်(House of Zhao)သည် ရှီအိမ်တော်(House of Zhi) ကို ကျင်းယန်တိုက်ပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်စေခဲ့သည်။
၄၁၃ – ဧကရာဇ် ဟိုနိုရီးယပ်စ် သည် ဗစ်စီဂေါ့သ် တို့၏ လုယက်ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံရသော အီတလီပြည်နယ်များဖြစ်သည့် တူးရှား၊ ကန်ပါးနီးယား၊ ပိုင်စီနမ်၊ ဆမ်နီယမ်၊ အာပူလီယာ၊ လူစီယားနား နှင့် ကာလာဘရီးယား တို့အား အခွန်သက်သာခွင့် အမိန့်တော်ပြန်တမ်းအား လတ်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
၅၈၉ – ပထမမြောက် ရပ်စ်ကာရက်ဒ်သည် တတိယမြောက် တိုလေဒိုကောင်စီကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး စပိန် ဗစ်စီဂေါ့သစ်တို့အား ကက်သလစ် အသင်းတော်သို့ ဝင်ရောက်စေခဲ့သည်။
၁၃၆၀ &ndash အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ တတိယမြောက် အက်ဒွပ်ဘုရင်နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ ဒုတိယမြောက် ဂျွန်ဘုရင်တို့အကြား ဘရီတီနီ စာချုပ်
၁၄၂၉ – ဂျုန်းအော့အတ် သည် အော်လီယန်းမြို့အား လုပ်ကြံသိမ်းပိုက်ခြင်းမှ ကယ်တင်ခဲ့ပြီး နှစ်တစ်ရာစစ်ပွဲ၏အရှိန်ကို အပြောင်းအလဲဖြစ်စေခဲ့သည်။
၁၄၅၀ – ဆဋ္ဌမမြောက် ဟင်နရီဘုရင်အား ကန်တစ်ရှ်မန်း ပုန်ကန်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
၁၅၁၆ – ထရင်း ဒိုင်း(Trịnh Duy) ဦးဆောင်သော ဘုရင့်အစောင့်တပ်ဖွဲ့သည် ဧကရာဇ် လီတောင်း(Lê Tương)အား လုပ်ကြံခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရာ မြို့တော် တန်လောင်Thăng Longမှာ ကျဆုံးခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
၁၅၄၁ – စပိန် စူးစမ်းရှာဖွေရေးသမား ဟာနန်ဒို ဒီ ဆော်တိုသည် ယနေ့ခေတ် ဝေါလ်မြို့၊ မစ္စစ္စပီပြည်နယ် အနီးတွင် ရပ်တန့်ခဲ့ပြီး မစ္စစ္စပီမြစ်ကြီးအား တွေ့မြင်ခဲ့သည်။(ထိုမြစ်သည် စပိန်တို့အတွက် ၁၅၁၉ ခုနှစ် အလန်ဆို အာဗာရပ်ဇ် ဒီ ပီနီဒါ ပေးခဲ့သော အမည်ဖြစ်သည့် Río de Espíritu Santo ဟု နာမည်တွင်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ကြက်ခြေနီနေ့ - ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အားလုံး၏ ကမ္ဘာ့ကြက်ခြေနီနေ့ ဖြစ်သည်။
ယနေ့ - ၁၉ မေ၊ ၂၀၂၂ [ရှင်းသန့်]
↑ Pharr၊ Clyde; Davidson၊ Theresa Sherrer; Pharr၊ Mary Brown; Williams၊ Dickerman (2006)။ The Theodosian Code and Novels, and the Sirmondian Constitutions။ Union, N.J.: Lawbook Exchange။ p. 319။ ISBN 9781584771463။
↑ Rosenwein၊ Barbara H. (2018)။ Reading the Middle Ages: Sources From Europe, Byzantium, and the Islamic World။ Toronto: University of Toronto Press။ p. 49။ ISBN 9781442636736 ; Vogel၊ Albrecht (1882)။ "Toledo, Councils of"။ in Schaff၊ Philip; Jackson၊ Samuel Macauley; Schaff၊ David S. (eds.)။ A Religious Encyclopædia, or, Dictionary of Biblical, Historical, Doctrinal and Practical Theology. Volume III။ Edinburgh: T. & T. Clark။ p. 2367။ OCLC 28786745။
↑ Dye၊ David H. (1993)။ "Reconstruction of the de Soto Route in Arkansas: The Mississippi Alluvial Plain"။ in Young၊ Gloria A.; Hoffman၊ Michael P. (eds.)။ The Expedition of Hernando de Soto West of the Mississippi, 1541-1543: Proceedings of the de Soto Symposia, 1988 and 1990။ Fayetteville, Ark.: University of Arkansas Press။ p. 40။ ISBN 9781557282705။
↑ Weber၊ David John (2009)။ The Spanish Frontier in North America။ New Haven, Conn.: Yale University Press။ p. 29။ ISBN 9780300140682။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၈_မေ&oldid=653983" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၉ မေ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။